Kunniin dhugaa hundi keenya beekuu qabnuudha - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Kunniin dhugaa hundi keenya beekuu qabnuudha
Kunniin dhugaa hundi keenya beekuu qabnuudha
Dhalli namaa akka bineensota biraa miti. Waan bineensota biraatiin adda nugodhu heddutu jira. Dhala namaa taanee erga uumamnee, dhugaa kanniinis simachutu nurraa eeggama.
Qabxiileen kunniin dhugaa hunda keenya addeedhaan ilaallataniidha.
Guddini dadhabbiifi dafqa malee hindhufu. Hangamuu guddachuufi sadarkaa ol’aanaa irra gayuu hawwinus.
Filannoon kee inni har’aa jireenya kee gara funduraa bocha. Kan xaafii facaasee qamadii haamate jiraachuu isaa takkaa hindhageenye.
Nama kabajuudhaani kabajaa kan argattu. Nama akka namaatti yoo kan fudhattuu, harkaafi onnee bal’istee yoo kan simattuu kabajaa itti dhiphattu akka salphatti kan argattu.
Yaanni gadheen (saahuu neegatiifii yaaduun) sammuu sisummeessa;dukkana malee ifnana akka hinargine sitaasisa. Jireenyi hangamuu sitti hadhaayu, aramaan rakkoo hangamuu sitti bayu, dukkana booda ifnanni jiraachuu ufyaadachiisuufi sammuu kee fudhachiisuu hinirraanfatin.
Fayyaan kee jireenya keeti. Jiraachuufi umrii dheerachuu feeta taanaan fayyaa keetiif xiyyeeffannaa barbaachisu laati.
Hanga lubbuun jirtu barnoonni hinhafu. Imalli jireenyaa waan heddu sibarsiisti.
Muuxxannoo jireenyaa isa kamuu irraa wanti gaariin baratamu heddutu jira.
Bareedini ilma namaa gara keessaati. Namatti siiqxee wojjiin jiraachuu yoo eegaltu kan siharkisu yaadaafi amala, ciminaafi jajjabina, obsaafi garaa bal’ina isaati malee ifnana irraa miti.
Waan dandeettuufi hindandeenne kan beeku sum. Namni waa’ee kee, hangamuu sitti dhihaatu, hunda beeka jechuun hindanda’amu.
Maddi gammachu jaalala. Jaalalaa (jaalala gosa kamuu ta’uu mala) fi gammachuun wolitti hidhata qabu.
Yaadannoo gadhee dagachuun rakkoo keessaa gara waan fooyya’aatti tankaarfachuudha.
Previous articleMootummaan Maaster Pilaanii Finfinnee hujiirra oolchuuf sochiirra jira, jedha Dr.Mararaan
Next articleBaankiin Biyyoolessa Itoophiyaa boordii Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa haarawaan bakka buuse
Ibrahimaliyi Nov 2, 2015 At 3:03 pm
Waan nama fayyadu nu barsiifte galatomi